အိပျရေးမဝတာဟာ ဗီတာမငျခြို့တဲ့တာကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
>> ဗီတာမငျ D
* ဗီတာမငျ D ဟာ စိတျခံစားမှုကိုကောငျးမှနျစပွေီး ကိုယျခံအားတကျစတေဲ့ ဗီတာမငျတဈခု ဖွဈပါတယျ။
* မကွာသေးမီက လလေ့ာခကျြမြားအရ ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ခွငျးဟာ အိပျစကျခြိနျနညျးပါးခွငျးနှငျ့ ဆကျစပျနတော တှရှေိ့ရပါတယျ။
* အထူးသဖွငျ့ အသကျ ၅၀ နှငျ့အထကျ လူကွီးတှမှော ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ပါက အိပျရေးမဝတာမြိုး ဖွဈစတေတျပါတယျ။
● ဗီတာမငျ D ကို ဘယျကနေ ရနိုငျသလဲ?
* နရေောငျခွညျဟာ ဗီတာမငျ D ရစမေယျ့ ပငျမအရငျးအမွဈ ဖွဈပါတယျ။
* ဗီတာမငျ D ကို ရရှိစမေယျ့ အစားအစာတှကေတော့ အဆီမြားတဲ့ ငါး၊ ငါးကွီးဆီ၊ ကွကျဥအနှဈ၊ နို့နှငျ့နို့ထှကျပစ်စညျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
>> ဗီတာမငျ E
* ကိုယျခန်ဓာရှိဆဲလျတှကေို မပကျြစီးအောငျ ကာကှယျပေးတဲ့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြဂုဏျသတ်တိ ပါရှိပါတယျ။
* ကိုယျခံအားကို တကျစတေဲ့အပွငျ အိပျစကျခွငျးဆိုငျရာပွဿနာတှကေိုလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
* ဗီတာမငျ E ဟာ အိပျရေးပကျြနတေဲ့သူတှဆေီမှာ ဖွဈပျေါတတျတဲ့ မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးမှုကို မဖွဈအောငျ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ကာကှယျပေးပါတယျ။
● ဗီတာမငျ E ကို ဘယျကနေ ရနိုငျသလဲ?
* သဈအယျသီး၊ မွပေဲ၊ နကွောစေ့ စသောအစအေ့ဆနျမြား၊ ဟငျးနုနယျ၊ ပနျးဂျေါဖီစိမျး၊ ခရမျးခဉျြသီး၊ ပွောငျးဖူးနှငျ့ ပဲပိစပျဆီတှမှော ပါဝငျပါတယျ။
>> ဗီတာမငျ C
* ကိုယျခံအားကောငျးစတေဲ့အပွငျ နှလုံးကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
* Pennsylvania တက်ကသိုလျရဲ့ လလေ့ာခကျြအရ တဈညကို ၆ နာရီအောကျသာ အိပျသူတှဟော ပိုမိုအိပျစကျသူတှထေကျစာရငျ ဗီတာမငျ C ပါဝငျတဲ့ အစားအသောကျတှေ စားသုံးမှုနညျးပါးတာကို တှရေ့ပါတယျ။
● ဗီတာမငျ C ကို ဘယျကနေ ရနိုငျသလဲ?
* ခဉျြသောသဈသီးမြား၊ ပနျးဂျေါဖီစိမျး၊ ကိုကျလနျ၊ ဟငျးနုနယျ၊ ငရုတျပှ၊ စတျောဘယျရီနှငျ့ ကီဝီသီးမြားမှ ရရှိနိုငျပါတယျ။
>> ဗီတာမငျ B6
* ကိုယျခံအားကောငျးစပွေီး ဦးနှောကျစှမျးရညျကို တိုးတကျစပေါတယျ။
* ဗီတာမငျ B6 ဟာ အိပျရေး၀၀ အိပျစကျစဖေို့ အထောကျအကူပွုတဲ့ Melatonin၊ စိတျပြျောရှငျစတေဲ့ Serotonin စသော ဟိုမုနျးမြားကို ထုတျလုပျပေးရာတှငျ ကူညီပေးပါတယျ။
* ဗီတာမငျ B6 ပါဝငျသော အစားအသောကျမြားကို မြားမြားစားပေးပါက စိတျကခြွငျးကို သကျသာစပွေီး ကောငျးစှာ အိပျပြျောစပေါလိမျ့မယျ။
● ဗီတာမငျ B6 ကို ဘယျကနေ ရနိုငျသလဲ?
* ငှကျပြောသီး၊ မုနျလာဥနီ၊ ဟငျးနုနယျ၊ အာလူး၊ နှားနို့၊ ကွကျဥ၊ ခြိဈ၊ ငါးနှငျ့ ဂြုံတို့တှငျ ပါဝငျပါတယျ။
>> ဗီတာမငျ B12
* ဦးနှောကျစှမျးရညျအတှကျ အရေးကွီးဗီတာမငျတဈခုဖွဈပွီး သှေးနီဥတှေ ဖွဈပျေါခွငျးကို ကူညီပေးပွီး နှလုံးကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
* ဗီတာမငျ B12 ပွညျ့ဝနခွေငျးဟာ စိတျကရြောဂါဖွဈနှုနျးကို နညျးစပေါတယျ။
● ဗီတာမငျ B12 ကို ဘယျကနေ ရနိုငျသလဲ?
* အသား၊ ငါး၊ နို့နှငျ့နို့ထှကျပစ်စညျးမြား၊ အခှံမာငါးမြားတှငျ ပါဝငျပါတယျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျသော အာဟာရပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာတှကေို နစေ့ဉျစားပေးခွငျးဟာ ကနျြးမာကွံ့ခိုငျစမေယျ့အပွငျ အိပျရေး၀၀ အိပျပြျောစဖေို့လညျး အထောကျအကူပွုတာ လကျတှပေ့ါပဲ။
ဒါကွောငျ့ အိပျမပြျောကွသူမြားအနနှေငျ့ နစေ့ဉျအာဟာရပွညျ့ဝတဲ့ အစားအသောကျတှကေို စားသုံးခွငျး၊ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု ပုံမှနျရှိအောငျနထေိုငျခွငျးတို့ကို ပွုလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံနှင့် အိပ်စက်မှုဟာ ဆက်စပ်မှုရှိနေတာကို သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုတွေကလည်း အိပ်စက်ခြင်းကို သက်ရောက်မှု ရှိစေပါသေးတယ်။ အိပ်ရေးဝစေပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေမယ့် ဗီတာမင်ငါးမျိုးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
* ဗီတာမင် D ဟာ စိတ်ခံစားမှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး ကိုယ်ခံအားတက်စေတဲ့ ဗီတာမင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
* မကြာသေးမီက လေ့လာချက်များအရ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းဟာ အိပ်စက်ချိန်နည်းပါးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
* အထူးသဖြင့် အသက် ၅၀ နှင့်အထက် လူကြီးတွေမှာ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ပါက အိပ်ရေးမဝတာမျိုး ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
● ဗီတာမင် D ကို ဘယ်ကနေ ရနိုင်သလဲ?
* နေရောင်ခြည်ဟာ ဗီတာမင် D ရစေမယ့် ပင်မအရင်းအမြစ် ဖြစ်ပါတယ်။
* ဗီတာမင် D ကို ရရှိစေမယ့် အစားအစာတွေကတော့ အဆီများတဲ့ ငါး၊ ငါးကြီးဆီ၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
>> ဗီတာမင် E
* ကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်တွေကို မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိ ပါရှိပါတယ်။
* ကိုယ်ခံအားကို တက်စေတဲ့အပြင် အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
* ဗီတာမင် E ဟာ အိပ်ရေးပျက်နေတဲ့သူတွေဆီမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုကို မဖြစ်အောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
● ဗီတာမင် E ကို ဘယ်ကနေ ရနိုင်သလဲ?
* သစ်အယ်သီး၊ မြေပဲ၊ နေကြာစေ့ စသောအစေ့အဆန်များ၊ ဟင်းနုနယ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲပိစပ်ဆီတွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
>> ဗီတာမင် C
* ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတဲ့အပြင် နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
* Pennsylvania တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာချက်အရ တစ်ညကို ၆ နာရီအောက်သာ အိပ်သူတွေဟာ ပိုမိုအိပ်စက်သူတွေထက်စာရင် ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေ စားသုံးမှုနည်းပါးတာကို တွေ့ရပါတယ်။
● ဗီတာမင် C ကို ဘယ်ကနေ ရနိုင်သလဲ?
* ချဉ်သောသစ်သီးများ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကိုက်လန်၊ ဟင်းနုနယ်၊ ငရုတ်ပွ၊ စတော်ဘယ်ရီနှင့် ကီဝီသီးများမှ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
>> ဗီတာမင် B6
* ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။
* ဗီတာမင် B6 ဟာ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ Melatonin၊ စိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ Serotonin စသော ဟိုမုန်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးရာတွင် ကူညီပေးပါတယ်။
* ဗီတာမင် B6 ပါဝင်သော အစားအသောက်များကို များများစားပေးပါက စိတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေပြီး ကောင်းစွာ အိပ်ပျော်စေပါလိမ့်မယ်။
● ဗီတာမင် B6 ကို ဘယ်ကနေ ရနိုင်သလဲ?
* ငှက်ပျောသီး၊ မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းနုနယ်၊ အာလူး၊ နွားနို့၊ ကြက်ဥ၊ ချိစ်၊ ငါးနှင့် ဂျုံတို့တွင် ပါဝင်ပါတယ်။
>> ဗီတာမင် B12
* ဦးနှောက်စွမ်းရည်အတွက် အရေးကြီးဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သွေးနီဥတွေ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကူညီပေးပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
* ဗီတာမင် B12 ပြည့်ဝနေခြင်းဟာ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နှုန်းကို နည်းစေပါတယ်။
● ဗီတာမင် B12 ကို ဘယ်ကနေ ရနိုင်သလဲ?
* အသား၊ ငါး၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အခွံမာငါးများတွင် ပါဝင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို နေ့စဉ်စားပေးခြင်းဟာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေမယ့်အပြင် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပျော်စေဖို့လည်း အထောက်အကူပြုတာ လက်တွေ့ပါပဲ။
ဒါကြောင့် အိပ်မပျော်ကြသူများအနေနှင့် နေ့စဉ်အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်ရှိအောင်နေထိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။